Ndị isi nchịkọta akụkọ Blusens | Akụkọ akụrụngwa
Akwụkwọ akụkọ ActualidadGadget.com bụ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ na-ezo aka na Spain na Ngwa, ngwanrọ, kọmpụta, ịntanetị na teknụzụ n’ozuzu ya. Kemgbe afọ 2006 anyị na -ekwupụta akụkọ kwa ụbọchị na isi ihe na ngalaba teknụzụ, yana nyochaa ọtụtụ ngwaọrụ site na kọmputa kachasị ike na okwu ikpe kachasị dị mfe, gụnyere ndị na-ekwu okwu, ndị nlekota oru, smartphones, mbadamba nkume ma ọ bụ ndị na-ehichapụ robot iji nye ihe atụ ole na ole. Anyị na-agakwa isi ihe omume teknụzụ nke ụwa dịka WMC na Barcelona ma ọ bụ IFA na Berlin ebe anyị na-akwaga akụkụ nke otu ndị editọ anyị iji nwee ike mezue ihe omume ma nye ndị na-agụ akwụkwọ anyị ozi niile na onye mbụ na n’oge dị mkpirikpi.
Ọzọkwa, n'ime Nkuzi anyi ngalaba ị nwere ike ịnweta ụdị ozi bara uru niile Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu nke gụnyere foto na / ma ọ bụ vidiyo nke enyemaka na nke na-ekpuchi isiokwu dị iche iche na ha si esi hazie mbadamba gam akporo a esi budata foto site na facebook inye ụfọdụ ihe atụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ isiokwu ndị ọzọ anyị na-arụ na webụsaịtị ị ga-emerịrị nweta ngalaba peeji ma ebe ahụ ka ị ga-ahụ ha haziri n’usoro.
Iji kwadebe ọdịnaya niile dị mma yana n'ụzọ kachasị sie ike, Actualidad Gadget nwere otu ndị ndezi ndị ọkachamara na teknụzụ ọhụụ na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na ide ihe dijitalụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ isonye na ndị otu akụkọ anyị ị ga-emezue ụdị a anyị ga-akpọtụrụkwa gị ozugbo o kwere omume.
Geek nchịkọta akụkọ na nyocha. N'anya nke Ngwa na teknụzụ ọhụrụ. Enwere m mmasị ịmara na ịnwale ụdị ngwaọrụ, ekwentị, kọmpụta, mbadamba ụrọ, laptọọpụ, n'etiti ndị ọzọ, ma nwee ọ toụ ịkọrọ ụwa ihe ọmụma m site n'okwu.
Kemgbe mmalite 90s, enwere m mmasị na ihe niile metụtara teknụzụ na kọmpụta. Ya mere, ịnwale akụrụngwa ọ bụla nke nnukwu na obere ụdị wepụtara, na-enyocha ya iji nweta ọtụtụ ihe na ya, bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ m kachasị atọ m ụtọ.
Ahụrụ m ihe niile metụtara teknụzụ na ụdị ngwaọrụ niile n'anya. Anọ m na-enyocha ụdị ngwaọrụ elektrọnik ọ bụla kemgbe afọ 2000 na m na-ama mgbe niile banyere ụdị ọhụrụ ndị ga-apụta. M na-ewere ụfọdụ ụfọdụ mgbe m na-eme ihe ndị ọzọ agụụ mmekọahụ m, foto na egwuregwu n'ozuzu. Ha agagh adi otu ihe ma oburu na ha adighi!
N'anya nke teknụzụ ọhụụ, mana ọ kachasị ngwaọrụ. Amaara m nke ọma na ọtụtụ ngwaọrụ ndị a na-ewepụta kwa afọ iji nwee ike ịnweta ngwaọrụ ndị masịrị m. Ozugbo enwetara m, m na-enyocha ha nke ọma iji mara uru ha nwere.
Na-ejikọkwa ya na ngwaọrụ na ngwa teknụzụ. Ana m anwale, nyochaa ma dee banyere smartphones na ụdị ngwaọrụ ọ bụla, ngwa na teknụzụ nke oge a. Agbalị ịdị “na” mgbe niile, mụta ma na-amatacha akụkọ niile.
Enwere m mmasị na teknụzụ, ọ bụghị ihe niile bụ Apple ... Echere m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepe ihe ndị na-adọrọ mmasị ma anyị nọ ebe a iji nwalee akụkọ teknụzụ kachasị ọhụrụ. Ana m agbalị inweta ihe niile m nwere ike ịbanye na ụlọ m ...
N’ịbụ onye nwere mmasị na teknụzụ, ọ na-atọ m ụtọ dịka nwatakịrị nwere ngwaọrụ. Ọ na-amasị m iji ụdị dị iche iche atụnyere, chọpụta atụmatụ ọhụrụ, ma mata ndị ọhụrụ nke ga-abịa. Ngwa nwere ike ime ka ndụ anyị dịkwuo mfe, ọ bụ ya mere m ji achọ ịkọ ihe m maara banyere ha.
Abụ m onye injinia n'ịhụnanya maka teknụzụ ọhụụ na ihe niile gbara netwọkụ netwọk. Offọdụ ngwa m kacha amasị m na-eso m ụbọchị ọ bụla, dị ka ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ngwaọrụ ndị na-enyere aka melite amamịghe na ahụmịhe nke Ngwa.
Ọkachamara kọmputa ọ bụ ezie na ọ hụrụ ụwa nke teknụzụ n'anya na robotik ọkachasị, agụụ nke na-eduga m inyocha ma nyochaa netwọkụ niile n'ịchọ ụdị ọhụụ ọhụụ banyere ngwa, ma maka ọmụmụ ihe ma ọ bụ ọrụ.
Teknụzụ ọhụrụ bụ ezigbo agụụ. Anọgidere m na-enwe obi ụtọ dịka ụbọchị mbụ na-ekwu maka ngwa ọ bụla dakwasịrị n'ahịa: atụmatụ, aghụghọ, ... na nkenke, ihe niile gbasara ngwaọrụ eletrọniki ọ bụla.
Enwere m mmasị na teknụzụ, ọkachasị ekwentị. Ọ na-atọ m ụtọ ịmara akụkọ gbasara ngwa, na ịnwale ha iji chọpụta, ya mere, ọ bụrụ na ha anapụta ihe ha kwere na nkwa ma ọ bụ na ha bụ ngwaọrụ ndị na-adịghị atọ ụtọ kwa ụbọchị.
Gadgetmaniaco, onye na-enwe nyocha ngwaọrụ nke a pụrụ iji gosipụta onwe ya n'ụdị nkà ọ bụla. Na mgbakwunye, enwere m mmasị ịnwale akụrụngwa ọ bụla na-abịa n'ụzọ m, yabụ enwere m ahụmịhe na teknụzụ ọhụụ ma enwere m obi ụtọ idozi obi abụọ ọ bụla nwere ike ibilite n'oge ojiji na njikwa ya.
Kọmputa sayensị nke na-enwekarị ọ investigatingụ n'ịchọpụta ngwaọrụ ọhụụ na-abịa n'ahịa. Ọ bụrụ na enwere otu ihe m na-achọ iji oge ezumike m na-eme, ọ na-enyocha ihe elektrọnik ọ bụla bịara m.
Ahụrụ m ihe niile metụtara teknụzụ na ngwaọrụ n'anya. Achọrọ m ịmụ oge niile ụdị ụdị ngwaọrụ dị iche iche nwere, nke bara uru maka oge ezumike ma ọ bụ ọrụ anyị.
Na-eto eto nwere mmasị na teknụzụ na ụwa moto. Knowingmara Ngwa n'ime omimi, ịhụ ka ha si arụ ọrụ ma ọ bụ etu ha siri meziwanye bụ ihe m nwere mmasị na ya.
Abụ m nwa okorobịa hụrụ teknụzụ n'anya. Ọ na-amasị m ịmụ ihe ma ọ bụrụhaala na isiokwu ahụ, ọkachasị ngwaọrụ. Onye ọ bụla masịrị m, ma drones, akpaaka na / ma ọ bụ akpaaka ụlọ na ọgụgụ isi bụ adịghị ike m.
Ngwa na-atọ m ụtọ mgbe niile, mana ọbịbịa nke ekwentị emeela ka m nwee mmasị na ihe niile na-eme na ụwa teknụzụ. Ekwenyere m nke ọma na ọ dịbeghị ngwaọrụ dị mma na nke bara uru karịa nke ahụ.
Cristina Torres ebe a oyiyi
N'ịbụ onye nwere ọmịiko maka ịntanetị na teknụzụ ọhụrụ, enwere m mmasị mgbe niile ịnwale ngwaọrụ niile dabara n'aka m, na-achọpụta ihe niile ha nwere, ma jiri ha tụnyere nsụgharị ha gara aga iji hụ ma ha emeela n'ezie. Ọ na-amasị m ịmara akụkọ niile gbasara ngwa ndị m nwetara, ihe ọmụma na m ga-ahụ isoro gị kerịta.